» ४२ दिनयता बुधबार सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित
४२ दिनयता बुधबार सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि नेपाल कोरोनाको तेस्रो लहरमा प्रवेश गर्न थालेको आशंकामा बल पुग्न थालेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा‍ समीरकुमार अधिकारीका अनुसार गत २४ घण्टामा पीसीआर परीक्षण गरिएका मध्ये २६‍२ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनले भने, ‘यो संख्या निकै धेरै हो । संक्रमण कायम रहेको छ । हेलचेक्र्याइँ नगरौं ।’ यस्तै, कर्णाली, गण्डकी र प्रदेश १ मा संक्रमण दर उच्च रहेको डा‍ अधिकारीले बताए । कर्णाली प्रदेशमा ५७ दशलमव ३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ४४ प्रतिशत र प्रदेश १ मा ३२ प्रतिशत नमुनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
संक्रमणदर बढ्नुको कारण हेलचेक्र्याइँ भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् । सरकारले जारी गरेको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले पनि भेला, सम्मेलन, जुलुस भइरहेका छन् । बजारमा किनमेल गर्नेहरूको भिड बढ्न थालेको छ । सार्वजनिक यातायात र सरकारी कार्यालयमा भौतिक दूरी कायम हुन सकेको छैन ।
यस्तै, अस्पतालहरूमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनेदेखि खोप प्रमाणीकरण गर्ने र पीसीआर परीक्षण गर्नेहरूको भिड छ । बुधबार टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पुग्दा त्यहाँ खोप प्रमाणीकरण गर्नेको घुइँचो थियो । त्यस्तै, ओपीडी सेवा लिनेहरूको पनि भिड थियो । खोप प्रमाणीकरणका लागि पुगेका प्युठान खलगांका रमेश धितालले भने, ‘के गर्नू अब प्रमाणीकरण नगरे विदेश जान नपाइने ? कम्तीमा अनलाइनबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरे हुने नि ।’
त्यस्तै, १६ वटा जिल्लामा ५ सय बढी उपचारार्थ सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा मोरङ, सुनसरी र झापा, बाग्मती प्रदेशमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र नुवाकोटमा संक्रमण दर उच्च रहेको छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी पूर्व, कास्की, बागलुङ, गोरखा, लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा ५ सयभन्दा धेरै उपचाररत संक्रमित छन् ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन भौतिक दूरी कायम हुन नसक्नु, मास्कको समुचित प्रयोग नहुनुले पनि कोरोना जोखिम बढेको बताउँछन् । यस्तै, आमनागरिकले खोप समयमा नपाउँदा पनि जोखिम कायम छ ।
कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा नै फैलिन थालेको छ । तर, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ सुस्त गतिमा हुँदा कोरोना महामारी नियन्त्रण अभियान सकस बनेको जनस्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् । नेपाल जनस्वास्थ्य संघका सचिव दीपेन्द्र खड्काले समुदाय तथा पालिकास्तरमा महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका रणनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले तत्काल जनस्वास्थ्य निरीक्षक नियुक्ति गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सरकारले कोभिड-१९ महामारी प्रतिकार्यका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन गर्न मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि पारित गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदपूर्ति हुन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सन्दर्भमा प्रक्रिया अघि बढेको बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन ।
सङ्गीतले बढाउँछ संक्रमितमा मनोबल
कोरोना संक्रमितमा मानसिक तनावको समस्या
केही दिनयता गम्भीर संक्रमित संख्या घट्दै
कोभिड संक्रमित थपिनेभन्दा निको हुने दोब्बर
केही कम हुँदै संक्रमित